၂၀၁၄ အောက်တိုဘာ | NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » အောက်တိုဘာလ
အောက်တိုဘာ 30, 2014 - - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (SMPTE (များ၏ Society က SMPTE ရွေးကောက်ခံသမ္မတရောဘတ် Seidel နှင့်အက်စ် Merrill Weiss, AXF အပေါ် SMPTE အလုပ်အဖွဲ့ Group ၏ဥက္ကဋ္ဌ, Panel ကိုဆွေးနွေးချက်များ White Plains, နယူးယော့ဒေသကိုသုံးသပ်တော်မူမည် R ကို)), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ CCW + SATCON, နိုဝင်ဘာအတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
ChyronHego အကြောင်းအရာမှာထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW):
အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW) ကို Preview ChyronHego Booth 1321 CCW မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ChyronHego ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ဆက်သွယ်ရေးနှင့် display ကို၎င်း၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြေရှင်းချက်သုံးခုကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်: အ GS2 Multi-ပေါ်တွင်ပြအဖြစ် Paint အားကစားထုတ်လုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကို စတူဒီယို Touch-screen ကို system ကိုထိကိုင်နှင့် Metacast (R), အပေါ်ထုတ်လွှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းနည်းများတဦး ...
RCS '' Bullet အမေရိကန်နှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် Debate အသံလွှင့်အဘို့အချိန်နှင့်တပြေးညီတွစ်တာပေါင်းစည်းရေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
လာမည့် 2014 အမေရိကန်နှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များ, Reality စစ်ဆေးမှုစနစ် (RCS) ချီကာဂိုယနေ့ညရဲ့ 2014 အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ထုတ်လွှင့်အတွက်အသုံးပြုရန် RCS '' Twitter ကို Bullet မိုဘိုင်းဂရပ်ဖစ်စက်များထဲမှစိတ်ကြိုက်တွစ်တာမှာအစိုးရနှင့်ရွေးကောက်ပွဲများအသင်း (@gov) နဲ့ပူးပေါင်း ဒေသခံချီကာဂို Affiliate WTTW11 (@wttw) ကဖော်ရမ်။ အတူတူအောက်တိုဘာလ 29, 2014 မှာ7အပေါ်: 00pm CDT, Twitter နဲ့ ...
တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကုမ္ပဏီကြောင့်သူ့ရဲ့ High-caliber ဖန်တီးမှုကမှရေးဆွဲအနည်းငယ်ပိုအာရုံစိုက်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အံ့မခန်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့်အတူရှိနေသည်။ Tedial သူတို့အားကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းပါ! လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းနည်းပညာတစ်ဦးကသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုတခုအိုင်တီ-ဗဟိုပြုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်တသားတကြှနျတျောတို့၏ဟာ့ဒ်ဝဲ-based မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲထားပါတယ်: ဤစဉ်းစားပါ။ သငျသညျကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ အကယ်. ...
နယူးယောက်၏နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံဂုဏ်ယူစွာ Darren Aronofsky နှင့် Spike Lee ကမှမာတင်ကျွန်တော်ဇာတ်ကားဒါရိုက်တာ Woody Allen ကနေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ NEW YORK-ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Lab ကနယူးယောက်, နယူးယောက်စီးတီးအတွက်နောက်ဆုံးရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံရုပ်ရှင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း, ဒီဇင်ဘာလ 19, 2014 ၏အဖြစ်စစ်ဆင်ရေးငြိမ်းလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, Technicolor-PostWorks နယူးယောက်တို့အကြားဖက်စပ်အဖြစ် 2011 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ...
လက်တင်အမေရိကရဲ့ NET နောက်ထပ်ကြီးထွားလာ Cable ကိုနှင့် VOD န်ဆောင်မှုများထားရှိရန် Volicon Observer System ကိုတိုးချဲ့ခြင်း
လေ့လာသူ RPM အခြေအနေအရ Access ကိုလျှို့ဝှက်ကုဒ်ဘာလင်တန်, Mass ၏လွတ်လပ်သော, လိုင်းများရာပေါင်းများစွာ၏ရီးရဲလ်အချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် - ။ အောက်တိုဘာ 29, 2014 - Volicon ယနေ့အဝေးမှအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်လက်တင်အမေရိက cable ကိုအော်ပရေတာ NET နောက်တဖန်က၎င်း၏လေ့လာသူ (R) တိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် (RPM) ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်အားစောင့်ကြည့်။ ရရှိလာတဲ့ RPM-400 ဖြန့်ကျက်ယခု 260 န်ဆောင်မှုများ၏ထိရောက်သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် - ...
CCW 2014 မှာ CCW 12, နိုဝင်ဘာ 13-961, Booth 2014 ကုန်ပစ္စည်းများ Display ကိုပေါ်မှာအလည်အပတ် Primestream: CCW 4.6, Primestream (R) မှာချိတ်ထုတ်လုပ်မှု Suite v2014 ချိတ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် (TM) ထုတ်လုပ်မှု Suite v4.6 ၎င်း၏ကောင်းချီးဆော့ဖ်ဝဲ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း အရှုပ်ထွေးဆုံးထုတ်လွှင့် Workflows ၏အလိုအလျောက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ပလက်ဖောင်း။ အသစ်က module တွေ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, နှင့်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အတူ ...
တားမြစ်ထား Tech မှ SATIS 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
အဆိုပါ Forscene တိမ်တိုက်-အခြေပြုဗီဒီယို Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်း SATIS 2014 အများဆုံးထံမှတုံ့ပြန်ချက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းအောက်ပါသစ်ကို Forscene ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်မှနယူးမြှင့်တင်: SATIS 18 မှာတားမြစ်ထား Technologies က Plc, SATIS 20 မှာတားမြစ်ထားရပ် A45 မှာနိုဝင်ဘာ 2014-2014, သွားရောက်လည်ပတ် အသုံးပြုသူများသည်: * high- သို့မဟုတ်၏ပြောင်းလဲနေသော display ကိုဖွကြောင်းနယူး Forscene user interface ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ခံစား (2014 လဲကျ) * အမြင့်-res codec ကို ...